Miseensonni WBO Xoollaay jiran 130 ol tahan 'nyaata summaa'e nyaachuun' wal'aansa irra jiru - BBC News Afaan Oromoo
Miseensonni WBO Xoollaay jiran 130 ol tahan 'nyaata summaa'e nyaachuun' wal'aansa irra jiru
Miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo Xoollaayitti leenjii irra jiran nyaata summaa'aa nyaachuun dhukkubsachuu BBCtti himan.
Miseensota Waraanaa ABO hospitaala Qiddus Luqaas magaalaa Walisootti yaalamaa jiran keessaa tokko akka maqaan isaa dhahamu hin barbaanne, kaleessa ganama ciree shaayee fi daabboo nyaatanii akkuma gadi bahaniin kukkufuu jalqabuu hime.
Miidhaan kun kan jalqabe gidduugala leenjii Xoollaay mana nyaataa mooraa 7ffaa jedhamu keessatti akka tahe miseensi waraanaa kun himeera.
Waraanni Bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaa simachuun gara leenjiitti galan mooraa 7ffaa fi saddeettaffaa jedhamu keessatti akka nyaatan hime.
''Kubbaayyaa shaayee itti dhugne jalatti waan akka daakuu adiitu kuufamee jira. ''Kanas namoota mooricha hoggananitti agarsiisuun karaa namoota fooyyee qabanii akka qoratamu jennee turre jedhe.
Mallattoo akkamiitu isin irratti mul'ate? gaaffii jedhus, ''afaan nama goggogsa, garaa ciniinnaa, garaa gubaa, dhiiga waliin nama ballaqamsiisa, fuulas nama daalacheessa,'' jedhan.
Namootni mooraa sana hogganan konkolaataa nuu waamanii akka gara hospitaala Walisoo dhufnee yaalamnu taasisaniiru jedhan.
'Gaala hatanii gugguufanii deemuun dhokachuu hin ta'u,' ABO
Miseensi WBO biraa hospitaala Qiddus Luqaas Walisootti yaalamaa jiru maqaan isaa Ibsaa jedhamu osoo hunda isaa nyaannee dhugnee fixneerra tahe hundi keenya lubbuun darbuu dandeenya ture jedhe.
''Maal jaallan? waanti kunoo foolii summii aramaa qaba jedheenii, namni hundinuu kan hanga tokko baraaramuu danda'e dhibbaa dhibba dhugee hin fixne, inni kaan ni dhamdhamee dabarsee, sanumatu summii tahee nu miidhe malee. Achumatti dhiisne kaane harki caalu, foolii aramaa waan qabuuf.
Akkuma ciree nyaanneen daqiiqaa sadii hanga shanii kan hin caalle keessatti namni kukufuutti ka'e''.
Jalqaba mana yaalaa mooricha keessa jirutti geeffamanis humna isaan ol waan taheef akka gara Hospitaala Walisootti ergamnu tahe jedhe.
Komishineroota mooricha hogganan waamnee itti agarsiisnaan yommuu dhaqanii ilaalan shayee isa nuuf kennan osoo hin taane, kan biraa waan fidaniif isa dura fudhannee hanbisne itti agarsiisne jedhe.
Namootni dhukkubsatanii achitti hafanis waan jiraniif isaanis lubbuudhaan miidhamuu danda'u sodaa jedhus qabna jedhe Ibsaan.
Ibsaan akka jedhetti dheengadda hojjetaan waan baay'ateef ni hir'ifna jedhanii namoota jijjiranii ture jedhee guyya tokko booda miidhaan kun isaanirra gahuu hima.
Korri bittineessaa Oromiyaa eegumsa kan nuuf taasisaa jiru tahus isaanumatti naanna'ee kan isaaninis eegu humna raayyaa ittisa biyyaati jedha.
Kun ammoo akka waliigaltee keenyaatti waraanni km200 ol isin irraa fagaatee isin eega, isinitti hin siqu jedhamus akka mana hidhaatti nu eegaa jiru jedhe.
Image copyright OMN
Goodayyaa suuraa Miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan waamicha araaraa abbootii gadaa fudhatanii galan
Abalu jennee qofaatti nama quba itti qabnu garuu qabaachuu baannus tokkummaa keenyatti namootni inaafan waan jiraniif shakkis qabna jedhe.
Haa tahu malee mooraakeessatti waldhabdee namoota biroo waliin hin qabnu jedhe.
Deeggartoota ABO jedhamuun namootni hidhamanii mooricha keessa jiran yeroo balaan kun miseensota waraanaa ABO irra gahu qabanii kaasuuf yeroo itti fiigan reebichii fi miidhaan isaan irra gahuusaa ibsaan dubbachuun kun ammoo immoo hedduu nu gaddisisera jedhe.
Ogeessi fayyaa maal jedhu?
Hospitaala Qiddus Luqaas Walisoo irraa Dr Abdullatiif Yisiyaaq hospitaalichi hawwaasa isa kaaniif tajaajila kennu dhaabuun miseensota Waraana Bilisummaa Oromoof qofa tajaajila keennaa jirra jedhan.
Hanga kaleessa halkaniitii namoota 129'f yaalii kennaa turre jedhan. Haa tahu malee lakkoofsichi har'as dabalaa jira jedhanii namootumti nagaan warra miidhaman yaalsisuuf fidan illee dhukkubsachaa jiru jedhan.
Har'uma iyyuu gara nama 20 kan tahan dhufaniiru jedhan Dr Abdullatiif Yisiyaaq. Qaama qorannoodhaaf barbaaduufis samuda dhiigaa fi bobbaa fuunee qorannoo gaggeessineerra jedhanii kutaa labiraatoriidhaa argachuun ni danda'ama jedhan.
'Marroo waliin galuuf erga waliigalle booda yaada jijjiirrate'
Hawwaasni Walisoo aannanis obaasuun tajaajila guddaa kennaafii jiru jedhanii summiin qaama keessa jiru qaama keessa deemuun ammayyuu dhukkubsaa jira jedhan.
Balaa mudate kanaan lubbuun kan darbe hin jirus jedhan Dr Abdiin. Namoota lama dhiira tokkoo fi dhalaa tokko irra miidhaa cimaan waan gaheeruuf ciibsinee yaalaa jirras jedhan.
''Akka nutti mul'atutti summiitu [qorichatu] nyaatatti dabalame malee nyaatatu summaa'e jechuu miti. Isaan iyyuu fooliin summii nutti dhufaa ture jedhan.''
Dr Abdullatiif Yisiyaaq, mallattoon summii kan akka garaa kaasaa, dhiiga balaqqamsiisuu, garaa gubaa fi mataa dhukkubiin irratti mul'achaa jira jedhan.
Wal'aanamtoota yaalii argataa jiran kanneenitti deddeebi'ee waan ka'uuf hordoffii waan barbaachisuuf mooraa hospitaalichaa bakka uummatni naannichaa nyaataa dhiyeessafii jirutti yaalaa jirra jedhan.
Yeroo mooraa leenjii kana galle Koreen Teeknikaa torban lama lamaan dhufnee isin ilaallla jedhanis tasuma nu dagataniiru jedha Ibsaan.
Namni biraan dubbisne tokko ammo koree teeknikaa keessaa eenyufaa akka tahan adda baasuu baannus hospitaalatti dhufanii kan nu hubatan jiru jedhe.
''Nama du'ee boolla gahe irratti iyyuun waan nama galateeffachiisu hin qabu jiraatti dhufanii ni ilaaluu qabu ture.''
Dabalataan hanqinni nyaataa mooricha keessatti akka isaan mudataa ture himuun hir'ina qaamaaf nu saaxilaa jirra jennee iyyannee turres jedhan.
Ol'aantummaa seeraa fi heera mootummaa irratti leenjii akka fudhataa turan himanii guyyoota sagal sagalitti kan xumuramu dhimma dinagdee biyyaa irrattis leenjii eegaluuf turre jedhan.
Ibsaan akka jedhutti ammoo kana booda achi deebi'anii leenjicha irratti hirmaachuun rakkoo tahuu mala jedha.
Dhimma kanarratti poolisii Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne.
Sagalee Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Marroo: Gaaffiif Deebii guutuu sagaleen
ABO: Ibsi mootummaan Itoophiyaa baase 'dhugaarraa kan fagaatedha'
17 Amajjii 2019
Fedhiin Putiin Afriikaa irraa qaban maal?
'Diraamaa' namoota bitamanii nama ajjeesan shananii kana maal jettu?
Tarkiifi Raashiyaan daangaa Siiriyaarratti waliin galtee taasisan
Qurxummiin erga bishaanii bahee guyyoota 3 turu Ameerikaatti yaaddoo fide
Marsabiititti lolaan lubbuu namaafi horii hedduu obbaase
Boolee Bulbulaa, Laaftoofi Aqaaqqiitti maaltu mudate?
Ertiraan miidiyaa Deutsche Welle ololaan himatte
Qola bilbilaa gogaa namtolchee kolfuufi aaru